तपाईंको व्यापार, उत्पादन वा सेवा कती राम्रो छ भन्ने कुराले केही फरक पार्दैन। तिनीहरू बेकार छन् यदि तपाईं आफ्नो सम्भावित दर्शकलाई लक्षित गर्न सक्नुहुन्न भने। दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने प्रभावित तरिका भनेको डिजिटल मार्केटिङ मार्फत नै हो। यस ब्लगमा, म डिजिटल मार्केटिंग,लक्षित मार्केटिंग र कसरी डिजिटल मार्केटिंग मार्फत दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछु।
डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो?
डिजिटल मार्केटिंग भनेको मार्केटिंग प्रक्रिया हो जुन डिजिटल उपकरणहरूको सहायता र इन्टरनेट पहुँचको माध्यमबाट गरिन्छ। डिजिटल मार्केटिंग पहिलाको परम्परागत तरिका भन्दा धेरै उत्तम र प्रभावकारी छ। त्यहाँ डिजिटल मार्केटिङ रणनीति को बिभिन्न प्रकार छन्। ती हुन् खोज ईन्जिन मार्केटिंग (SEM), खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO), सामाजिक मिडिया मार्केटिङ(SMM), सामग्री मार्केटिङ, सम्बद्ध मार्केटिङ, ईमेल मार्केटिङ, प्रभावकारी मार्केटिङ, र भाइरल मार्केटिङ।
डिजिटल मार्केटिङका फाइदाहरू:
यो तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्न एक प्रभावकारी र सस्तो तरीका हो।
डिजिटल मार्केटिङ मार्फत, तपाईं आफ्नो मार्केटिङ अभियानको प्रभावकारिता ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। परम्परागत मार्केटिङमा यो सम्भव छैन।
तपाइँ तपाइँका ग्राहकहरु बाट द्रुत प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
डिजिटल मार्केटिङले तपाईंलाई धेरै भन्दा धेरै लक्षित दर्शकहरूसँग कनेक्ट हुन मद्दत गर्दछ।
यो तपाईं नेतृत्व र बिक्री ड्राइव गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले यो एक उच्च रिटर्न अन लगानी (ROI) डिजिटल मार्केटिंग अभियान द्वारा सुनिश्चित गरिएको छ।
लक्षित दर्शकहरु भनेको के हो?
लक्षित दर्शकहरु मानिस वा ग्राहकहरुको समूह हो। जुन तपाईको उत्पादन वा सेवामा अधिक रुचि राख्छ। आजकल दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग उपकरणहरूको प्रयोगको माध्यमबाट प्रभावकारी र शक्तिशाली छ।
दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने कारकहरू निर्भर हुन्छ।
1. तपाइँको ग्राहकहरु छनौट गर्दै।
2. कुन ग्राहकहरुलाई सेवा गर्ने छनौट गर्दै।
3. कसरी ग्राहकहरुलाई सेवा गर्ने निर्णय गर्दै।
4. बजारको आकार अध्ययन गर्दै।
5. बजारमा बिक्री क्षमता अध्ययन गर्दै।
डिजिटल मार्केटिङमा कसरी दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने?
डिजिटल मार्केटिङ दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने एक प्रभावकारी र सस्तो तरीका हो। तपाईं एसईओ, सोशल मिडिया मार्केटिङ, ईमेल मार्केटिङ, भाइरल मार्केटिंग, इत्यादि जस्ता डिजिटल मार्केटिङ टेक्निकहरू मार्फत तपाईंको लक्षित दर्शकहरू समक्ष पुग्न सक्नुहुनेछ।
एसईओ: खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) एक टेक्निक हो जुन तपाईं गुगल, याहू, बिंग जस्ता खोज ईन्जिनहरूको पहिलो पृष्ठमा तपाईंको वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ। गुगल अनुसन्धानका अनुसार ९०% इन्टरनेट प्रयोगकर्ता खोज परिणामको पृष्ठ १ मा जान सक्दैन। यदि तपाईंको सामग्री एस ई ओ अनुकूलित छ भने त्यहाँ तपाईंको साइटको उच्च श्रेणीकरणको बढी सम्भावना छ र तपाईं धेरै भन्दा धेरै लिड्स प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
सामाजिक मिडिया मार्केटिङ:तपाई केवल आफ्नो व्यापार उत्पादन र सेवा विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, पिन्टेरेस्ट, ट्वीटर, जस्ता विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा पोष्टिंग र साझेदारी गरेर। तपाईं यी सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा सशुल्क विज्ञापन गर्न सक्नुहुन्छ अधिक दर्शकहरू समात्न र तपाईंको बिक्री प्रक्रिया बढाउनको लागि।
ईमेल मार्केटिङ: व्यक्ति प्राय: एक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मबाट अर्कोमा सर्दछन्। उदाहरण को लागी, आजकल फेसबुक को क्रेज कम हुँदैछ किनकि मान्छे इन्स्टाग्राममा सर्दै छन्। तर व्यक्तिको ईमेल आईडी स्थिर छ र तिनीहरू यसलाई प्राय: परिवर्तन गर्दैनन्। त्यसोभए, दर्शकहरूलाई लक्षित गर्नको लागि ईमेल मार्केटिंग धेरै प्रभावकारी छ। ईमेल मार्केटिंगमा तपाई वाणिज्यिक सन्देश साधारणतया ईमेल मार्फत मानिसका समूहमा पठाउनुहुन्छ।
भाइरल मार्केटिङ: भाइरल मार्केटिङ भनेको सामग्री मार्केटिङका टुक्राहरू सिर्जना गर्ने प्रक्रिया / विधि हो जुन ध्यान आकर्षण गर्ने र सबैले मनपर्दछ। मार्केटिङको यस विधिले मुख्यतया फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लगहरू आदि जस्ता सामाजिक मिडियाको प्रयोग गर्दछ, टिभी, रेडियो वा समाचार पत्रमा विज्ञापन राख्नुको सट्टा। आज २०२० मा जब केहि भाइरल हुन्छ यो द्रुत र व्यापक रूपमा एक व्यक्ति देखि अर्को व्यक्तिमा फैलिन्छ मुख्य रूपमा सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मबाट।
त्यसैले, डिजिटल मार्केटिङ मार्फत दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने यी प्रभावकारी तरिकाहरू छन्। यी खोज ईन्जिन मार्केटिङ,, भिडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सामाजिक मीडिया मार्केटिङ, सम्बद्ध मार्केटिंग तपाईंको लक्षित श्रोता समक्ष पुग्ने आधुनिक तरिकाहरु हुन्।
डिजिटल मार्केटिङ सिक्दै घरबाटै अनलाईन आम्दानी गर्नुहोस्।